धर्मशास्त्र अनुसार बिहिबारको दिन यी पाँच काम नगरेकै राम्रो ! – Nayabook
धर्मशास्त्र अनुसार बिहिबारको दिन यी पाँच काम नगरेकै राम्रो !
हिन्दु धर्ममा बिहिबारको दिनलाई एकदम विशेष मान्ने गरिन्छ । सबै देवी-देवताहरुको गुरु बृहस्पति हो र नौ ग्रहहरुमध्ये सबैभन्दा ठुलो ग्रह बृहस्पति हो। यस दिन भगवान विष्णुको उपासनाको विशेष महत्व छ। यो भनिएको छ कि गुरु ग्रहणको, शिक्षामा असफलता र साथसाथै धार्मिक गतिविधिहरुमा मन कम लाग्ने समस्याहरु देखा पर्दछ। यस दिन विधि-विधानका साथ पूजा गरेमा ग्रह शान्त रहने विश्वास गरिन्छ। यदि तपाईले बिहिबारको दिन यी ५ कामहरु नगरेमा घरमा सुख-शान्ति र समृद्धि बढ्छ।
१. महिलाहरुले कपाल नधुनुहोस: धर्मशास्त्र अनुसार बिहिबारको दिन महिलाहरुले कपाल धुनु शुभ मानिदैन। किनकि महिलाहरुको कुण्डली बृहस्पति अर्थात् पति र बच्चाको कारक मानिन्छ। यसले दुवैको जीवनमा नकारात्मक असर पर्नसक्छ। महिलाहरुले यस दिनमा कपाल धोएमा गुरु कमजोर हुने र जसको कारण शुभ प्रभावलाई कम हुन्छ। बिहिबारको दिन महिलाहरुले कपाल धोएमा बृहस्पति ग्रह कमजोर हुन्छ।
२. नङ र कपाल काट्नुहुदैन: ज्योतिषशास्त्र अनुसार गुरु ग्रहको तात्पर्य जीवनसंग हुने विश्वास गरिन्छ। यस दिन नङ र कपाल काट्नुहुदैन। यसले तपाईको आयु र घरको आर्थिक समृद्धिमा नकारात्मक असर गर्दछ। साथ-साथै पुत्र संकट पनि पर्न सक्छ। यो पनि मान्यता छ की यस दिन दारीजुँगा पनि काट्न हुदैन। धर्मशास्त्र अनुसार दारीजुँगा काट्नको लागि आइतबार , सोमबार , बुधबार र शुक्रबारको दिन उत्तम मानिएको छ। बिहिबारको दिन धर्मको दिन भएकोले माछामासु , जाँडरक्सीको सेवन गर्नुहुदैन।
३. लुगा नधुनुहोस: वास्तुशास्त्रअनुसार घरको उत्तरी कोणमा स्वामी गुरुको बास हुने विश्वास गरिन्छ। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रुपमा घरको साना छोराछोरीमा पर्छ। साथ-साथै यस कोणले पुत्र प्राप्तिमा समेत असर पार्न सक्छ। त्यसैले यस दिन कपडा धुने , घरको भुई सफा गर्ने र घर भित्रका सामानहरु निकाल्ने कामहरु गर्नुहुदैन। यी सबै चीजहरुले घरको उत्तरी कोणमा प्रभाव पार्छ। जसको फलस्वरूप शिक्षा , धर्म , घरको आर्थिक समृद्धि र बच्चामा अशुभ प्रभाव पर्दछ।
४. लक्ष्मी-नारायणको पूजा नगर्नुहोस: धर्मशास्त्र अनुसार बिहिबार लक्ष्मीलाई प्रसन्न गर्नको लागि सबैभन्दा फलदायी दिन मानिन्छ। यो दिन लक्ष्मीको दिन हो। यस दिन लक्ष्मी-नारायणको उपासना गरेमा घरमा आर्थिक अस्थिरता र पति-पत्नीबीच कटुतता आउँछ। यदि तपाई विवाहित हुनुहुन्छ भने तपाईको वैवाहिक सम्बन्धमा समेत समस्या उत्पन्न हुनसक्छ।